Kutaridzika kwerudo: maitiro ekuvaziva | Stylish Men
Alicia tomero | 10/06/2022 10:00 | Vakaroorana uye Bonde
Maziso chikamu chekunzwa kwekuona uye anoaita nzira yedu yemutauro wemuviri taura zvatiri kunzwa. Kunyange zvazvo zvingaita sezvisingadaviriki, maziso edu anoratidza zviratidzo zvinojekesa patinotarisa vanogona kuva neshungu Nzira yekuziva sei?
Rudzi urwu rwekutaridzika isu takatsanangura ndedzimwe dzepfungwa dzakaunganidzwa nesainzi. Kana nemukana iwo ari rudzi rwechitarisiko chaunoda kuwana, kana iwe uchida mukomana kana musikana iyeye, unoziva kuti newewo. vanogona kuzvishandisa pachavo.
1 Zvitarisiko zverudo, ndingazvizive sei?
2 Ndeapi mamwe marudzi ekutaridzika aripo?
3 subjective anotarisa
4 Paunoda kutanga romance
5 Paunenge uchida kupfimba nemaziso
Zvitarisiko zverudo, ndingazvizive sei?
Munhu anogona kudanana nemumwe munhu, asi zvichaonekwa mune avo kugara uchitarisa, Achakutarisa mumaziso chaimo paanotaura newe. Ichokwadi kuti chido pachacho chinowanzoita chinyengeri, uye zvichida pane dzimwe nguva kunyara kunoita kuti tifuratire zviso zvedu. Asi kana iwe ukateerera, iyo inotarisa inodzoka, kunyange kana kunyadziswa kwatora mamiriro acho ezvinhu, kana chero ipi zvayo inofadza musoro wekunze, pakupedzisira haakwanisi kurasikirwa nemeso akananga.
Wakamboona rinhi kutarisa kunofambisa chiedza? Zvakanaka, ndiko kutarisa kusinganzwisisiki, iyo inotumira kufarira, ine kupenya, simba, kana vadzidzi vachiwedzera. Eya, ndiwo maitiro anoita seanosiya kana munhu akada nemoyo.
Ndeapi mamwe marudzi ekutaridzika aripo?
Kune mamwe marudzi ekutaridzika anogona kujekesa izvo nguva dzekuda kana kufarira. Isu tinoongorora kuti zvakaita sei paunotarisa kudivi, pakadzika kana iwe wakatarisa kure.
Pakati peimwe mhando yekukurukurirana iwe unogona kuona kana iyo kutarisa ichida kutaura nguva iyoyo: Kana maziso ako akatamira kurudyi imhaka yokuti ari kufungidzira chimwe chinhu kana kuti ari kureva nhema.
Si maziso anofamba paanenge achitaura, imhaka yokuti ari kuedza kuyeuka chimwe chinhu kana kuti kuteerera zvavanenge vachitaura.
When iyo yakatarisa inorerekera pasi Ndopaunoyedza kuswedera pedyo nemanzwiro emukati, dzokorora manzwiro iwayo uye kuita kuti aite sekuti ari kufara kana kufara nekuvapo kwako. Ona kana ichidzokera kumashure isa mufananidzo pamberi uye anokutarira nekuti ndipo paasingapotsa kana chimwe chinhu pamusoro pako uye anoda kukuteerera.
Kana munhu iyeye akadaro maziso akavharwa nehafu, imhaka yokuti zvinogona kukonzera kuti agumbuke nechimwe chinhu kana kuti mumwe munhu, anogona kugumbuka. Kana ichingobwaira nguva dzose uye haatarisi zvakanaka, kungava kuti haana zororo kana kuti ane chimwe chinhu chaanovanza, kunyange zvazvo pane dzimwe nguva apo anogona kubwaira zvikuru nemhaka yokuti anoedza kuvanza kuti ari murudo.
Iwe unofanirwa kuongorora mamwe marudzi emasaini kuti ugone kududzira iyo yakatarisa. Kana akakutarisa achinyemwereraTarisa rudzi rwekunyemwerera kwaanoita. Kana matama ake achikwira uye makona emeso ake achibwaira, imhaka yekuti munhu iyeye anofara nekuvapo kwenyu uye manzwiro ake ndeechokwadi.
Kune zvimwe zvakawanda, semuenzaniso, kana munhu iyeye arikukutarisa kumusoro nekudzika imhaka yekuti anoratidza kukufarira kwakawanda, anokuongorora uye anogona kureva chitarisiko chinopinda uye chisina kugadzikana. Zvisinei, kana nguva dzose anokutarisa mumaziso uye anoita seanokutonga ndipo apo munhu iyeye anenge akanyatsozvivimba, anogara aine kuzviremekedza kwakakwirira.
Anonditarisa otarisa kure nekukurumidza
Paunoda kutanga romance
Hongu izvozvo kutarisa kuri kupinda uye kubhadhariswa kuchengetedzwa, ndipo patinogona kubva kune rumwe rutivi kuona kuti munhu iyeye anofadza sei. Ndipo paticharatidzawo kuti rudzii rwechitarisiko rwatinodudzira nekuti chaizvo tinoda simba iroro uye simba.
Zvinogonawo kuitika kuti munhu wacho haakwanisi kutarisa, asi anozviita nekuputika, kwechinguvana kana zvidimbu zvesekondi. Kana kutarisa kwako haina kusununguka, asi kuti inokanganisa, anotarisa zvishoma kudarika sekondi imwe obva atama, imhaka yekuti pane imwe mhando yekunzwa kwerudo.
Si anongokutarisa kwenguva isingasviki sekondi zvino wozotarisa kure, ndega zvinogona kureva kuti unofarira. Zvisinei, nyatsotarisa kana kunyemwerera kwakanaka uku kuchimuperekedza, sezvo zvichireva chimwe chinhu chinofadza.
Paunenge uchida kupfimba nemaziso
Kana chako chiri chekunyengedza, chitarisiko chinogona simbisa chipo chawakavanza. Usarasikirwa neruzivo mukunyengedza kwako uye gara uchiedza kutarisa kana uchitaura nemunhu waunoda.
Asi ita wakasununguka, hazviratidzi kuti uri kupindira nzvimbo yako kana kuda kunetsa. Iwe unogona zvakare kutarisa neshungu uye wozotarisa kure kune zvikamu zvesekondi.
kana uri murume edza kusatarisa mazamu emukadzi, izvo hazvisi zvekuda kwako. Kana iwe uchida kutarisa, ita nekuchenjerera uye edza kutaura zvakanyanya chiso nechiso uye kutarisa mumaziso. Kunyangwe kune varume nevakadzi, chitarisiko chinodenha hachinakidzi, izvo zvinogona kusiyiwa kana pane chivimbo chakawedzerwa.
Zvisinei, simba rekutaurirana pakati pevanhu rinofanira kushanduka, tinofanira kuedza kusvika pakuzivana isu pachedu uye tisarega chimwe chinhu chatinofanira kudzidza kubva kune vamwe chichirasika: mutauro usingatauri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Stylish Varume » Kukodzera » Vakaroorana uye Bonde » Kutaridzika kwerudo: maitiro ekuaziva
Mukadzi anohwanda sei kuti anokuda?